Global Aawaj | » डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर – Global Aawaj
डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर
माघ ५ ,
काठमाडाैं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै ११ दिनदेखि अनशनमा रहेका प्राध्यापक डाक्डर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले गठन गरेको ९ सदस्यीय टोलीले डा. केसीको स्वास्थ्य जाँच गर्दा उनको छातीमा संक्रमण भएको पाइएपछि एन्टिबायोटिक चलाइएको उनको उपचारमा संलग्न डा. प्रमेश आचार्यले बताए ।
यस्तै, डा. केसीको मांसपेसी बाउँडिने, रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम रहेको, रक्तचाप पनि घटेको, रगतमा सुगर र फस्फोरससमेत कम हुँदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । सरकारले आफूसँग गरेको सहमति अनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक नल्याएको भन्दै डा. केसीले इलाममा गएर १६ अों अनसन सुरु गरेका हुन् ।
तर, स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि विहिबार राति नै उनलाई सेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको हो । यसैबीच सरकारले विगतमा गरेका सहमतिअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीको समर्थनमा आज राजधानीको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन हुने भएको छ । सोलिडारिटी फर डा. केसी एलाईन्स्को अगुवाईमा डा. केसीको समर्थनमा ऐक्यवद्धता हुन लागेको हो ।